‘आमा’ - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
अनुप कुमार बराल || 30 April, 2022
छोराछोरीको छुट्टी भा’छ यसपाली न्यु इयरमा पोखरा जाऔँ है राजा, यति भनिसक्दा नसक्दै उसले श्रीमतीतिर हेर्यो र भन्यो के भनेकी रुबी तिमीले ७४ वर्षकी आमालाई चाहिँ के गर्नु ?
आमा गाडी चढ्न पनि सक्नुहुन्न दुई दिन त हो नि घरैमा आराम गर्नुहुन्छ, फेरि कमली पनि त छे नि । हेरिहाल्छे नि । पूरै आइट्नरी एकै सासमा सकिन् उनले ।
नयाँ सालको इभ मनाउन लोग्ने स्वास्नी र दुई छोराछोरी पोखरातिर हिँडे । घुमघाम सारै रमाइलो भयो । स-परिवार लेक साइडको रात्रिकालीन ताम्झाममा खुब रमाए । समय स्वाभाविक बित्यो, १२ बजे न्यु इयर उदघोष भयो, ‘अल हेप्पी ।’
यता बुढीआमा पश्चिम कौसीमा साझ निकै बेर ७४ सालको सूर्य अस्ताउँदाको दृश्य हेरेर टोलाइरहिन् । साँझ परेपछि दियो बाल्दै सबैको सुस्वस्थ्यको कामना गरिन् । कमली भन्न आ मुमा म भोलि बिहानै दोलखा जानुपर्ने भो उता बुढालाई साउदीमा पुलिसले समातेछ सासू ७० वर्षकी हुनुहुन्छ मुर्छा परेकी छिन् रे म त नगई भएन ।
नयाँ वर्ष शनिबारको दिन १ गते बिहान ब्रेकफास्ट,प्याराग्लाइडिङ्ग, सारङ्गकोट. सिटी टुरले नयाँ वर्षलाई सबैले खुब स्वागत गरे । खानापिना रमाइलो जीवन सुन्दर फेवाताल र माछापुच्छ्रे जस्तो घुमे फोटो खिचाए । नयाँ वर्षको बिहानी सूर्योदयसँगै आमा सबैको दीर्घायु र प्रगतिको कामना गर्छिन् । एक्लै उनलाई अरू केही गर्न मन लाग्दैन । मात्र छोरा बुहारीको बाटो हेरिराख्छिन् ।
आइतबारको दिन घुम्न गएका छोरा बुहारी बच्चाबच्ची काठमाडौं फर्कन्छन् । साह्रै गर्मी भयो भन्दै रिभरसाइडमा धेरै बेर स्विमिङ गर्छन् नुहाउँछन् । फर्किंदा रमाइलो यात्राबारे गफ गर्दै घर पुग्छन् । घर पुग्दा निकै अँध्यारो भइसकेको हुन्छ । आमाले मूलढोका खोलिदिन्छिन् ।थाहा हुन्छ, छोरा बुहारी हल्का पिएर आएछन् । तैपनि, उनी केही बोल्दिनन् । केही बेरपछि आमाले केही भन्न खोज्दा छोरोलाई झर्को लागेझैँ भन्छ, ‘आमा, ११ बजिसक्यो ढिलो भयो, सारै थाकेका छौँ, भोलि वात मारुला है’
उनीहरू सुत्न जान्छन् । आमा पनि चुपचाप ढोका लगाएर सुत्न जान्छिन् ।
भोलिपल्ट बिहान ६ बजे आँखा खुल्छ । छोरा-बुहारी आ-आफ्नो मोबाइल समात्छन् । खुसी हुँदै फेसबुकमा आफूले घुम्दाका पोस्ट गरेका रमाइला फोटाहरूमा आएका लाइक र कमेन्ट ले दङ्ग पर्न थाल्छन् ।
कस्तो संयोग यो वर्ष ३ गते नै मातातीर्थ औंसी परेछ । सबैले ‘हेप्पी मदर्स डे’ लेखेको देखेर बुहारीले आफ्नी आमासँग बसेको फोटो मा फुलबुट्टा भरेर पोस्ट गर्छन् । छोरो लाइक र कमेन्ट गर्दै दंग पर्छ । बिहान ८.३० बजिसकेको हुन्छ । मोबाइलबाट एक छिन विश्राम लिएर छोरो बाथरुमको ढोका खोल्दा वृद्ध आमा बाथरुममा लडिराखेकी थिइन अर्धचेतवस्थामा ।
ऊ कराउँछ, ‘आमा…! आमा …! उठाउँछ बुहारी पनि ओछ्यानबाट आइन् । दुवै मिलेर नजिकै अस्पताल पुर्याउँछन् । तीन दिनदेखि छोरा बुहारी नाति नातिनी को न्यास्रोले एक्लै परेकी आमाले केही पनि खाएकी थिइनन्, कमली घर गएपछि दबाइ पनि खाने मेलो नबुझेकाले त्यही कमजोरीले ढलिन् ऊनी । डा.साब आइपुग्छन् । चेकजाँच गर्दै भन्छन्, ‘१० मिनेट मात्र पनि अगाडि ल्याउनुभाको भए उहाँलाइ बचाउन सकिन्थ्यो ।’
छोरा अनुत्तरित भई उभिरहन्छ । फेसबुकमा मदर्स डे भन्दै बिताएको बिहानको समयमा ऊ आमाको कोठामा पुगेको भए ????
राति बाहिरबाट आएर एकैछिन आमासँग बसेर भलाकुसारी गरेको, भए !!! सायद गुमाउनु पर्दैनथ्यो होला आमालाई ।
औँसीकै दिन आमालाई गुमाउँदा आफैँलाई सम्हाल्न सकेन । सबैजना जम्मा भए ।
एकोहोरो टोलाइरहेको ऊ भिडको आवाजले झसंग भयो । उसले आमालाई हेर्यो ।
थाहै नपाई आमाको लासमाथि आँसु खसिरहेका थिए, तप्प…तप्प…तप्प….!
[…] यो पनि…‘आमा’ […]